Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay la kulmay Xildhibaanada labada gole ee laga Soo doortay degaanada Jubbaland. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay la kulmay Xildhibaanada labada gole ee laga...
Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay la kulmay Xildhibaanada labada gole ee laga Soo doortay degaanada Jubbaland.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ayaa Xalay casho sharaf ugu sameeyay Magaalada Muqdisho Xildhibaanada labada gole ee laga soo doortay Jubbaland.
Sidoo kale Axmed madoobe ayaa waxaa uu Xildhibaanada u sheegay in muhiim ay tahay inay qeyb ka qaataan sidii Dagaalamayaasha Al-Shabaab loogu saari lahaa deegaanada Maamulka Jubbaland,isagoona ku taliyay in sida wadajir loogu wada shaqeeyo Hormarka Deegaanada Maamulkaas.
Halkan ka Daawo Sawirada: